Accueil > Newsletters > Newsletter n° 20 - Fanambarana
« Newsletter n° 20 - Communiqué
Newsletter n° 20 - Statement »
publié par Admin, le dimanche 9 décembre 2012
Ny orinasa italiana Tozzi Green, sampan’ny orinasa lehibe italiana atao hoe Tozzi Renewable Energy, dia mamboly savoa (voly natao ho avadika solika) ao Ihorombe, faritra Afovoany Atsimon’i Madagasikara. Ny tanjony dia ny ahazo tany mivalapatra hatramin’ny 100 000 ha. Milaza ity orinasa ity fa nahazo alàlana tamin’ny mponina any an-toerana : iza marina ireo mponina niherany sy nanome alàlana azy ? ireo manam-pahefana any an-toerana ve? Sa lonaka sy Ray aman-dreny vitsivitsy ?
Izao avy ny fitarainan’ny mponina
Ny 16 novambra teo, dia Ray aman-dreny folo avy amin’ny tanàna sivy ao amin’ny kaomina Satrokala, Andiolava, Ambatolahy ary Ihosy, faritr’Ihorombe no tonga tao Antananarivo. Nanao famelabelarana izy ireo teo anoloan’ny mpanao gazety. Naneho ny fitsipahany ny asan’ity orinasa ity ary indrindra ny fijaliany sy ny antso vonjiny. Namonjy ny tanan-dehibe izy ireo hilaza mivantana ny fitarainany satria "voahosihosy ny zon’ireo tompon-tany ". « Tsy misy intsony ny maha-tompon-tany anay fa io vahiny io avokoa no manjakazaka amin’izany […] Nitariny tsikelikely io velaran-tany novoleny io, ka hatramin’ny taninay dia lasa ampiasainy ihany koa. Voatery miala izahay vahoaka madinika, satria miaramila mitam-basy no manaisotra anay amin’ny taninay.[…] Manginy fotsiny ny tsy fisian’ny vilona azon’ny omby hohanina ka maty eo am-pitoerana ny biby fiompinay. Noravany avy hatrany fa tsy narahina fombafomba ny fasan-drazanay sy ny tanimboly. Ireo toerana manan-kasina ihany koa, dia efa voatrongy tamin’ny traktera avokoa ».
Very hevitra tanteraka izy ireo ankehitriny satria mahatsapa tena ho toy ny atody miady amam-bato ihany eo anatrehan’izao raharaha izao, ka manao antso avo amin’ny Fitondram-panjakana […], fa mitsoa-ponenana ny ankamaroan’ny olona ary zary lasa traboina mihintsy. Manoloana ny fanaovana ampihimamba ny tanin’izy ireo, dia notsindrin’ireo Fokonolona fa «ho ratsy dia ratsy ny fiantraikan’io fakan’ny Tozzi Green ny taninay io ». Mosarena ny mponina ary voazimbazimba ny fomban’ny Bara. (1)
Samy hafa tokoa ny fomba nandraisan’ny mpanao gazety ity valan-dresaka ho an-dry zareo ity : misy ny tsy niteny, misy ireo izay namoaka lahatsoratra saingy tsy nanoratra ny anaran’ity orinasa ity, misy kosa ireo izay nitantara saingy niampanga ireo Ray aman-dreny nisolotena ny mponina hoe "dahalo".
Etsy andanin’izany ny faha-18-n’ny volana novambra, olona 350 ao amin’ireo Fokontany 17 ao amin’ny kaomina Ambatolahy no nanao sonia sy nanoratra ho an’ny manam-pahefana eo amin’ny faritra ary eo anivon’ny fitondra-mpanjakana, iantsoana azy ireo handray andraikitra mba ampitsahatra ny fihitaran’ny fambolena ataon’io orinasa io, handray andraikitra ihany koa mba tsy hisian’ny fandroahana ny mponina amin’ireo faritra tadiavin’ny Tozzi Green sy ny orinasa Landmark ho alaina.
Ireo fitarainana ireo dia mifameno amin’ny tatitra voarain’ny Collectif TANY avy ao amin’ny tanànan’i Satrokala, Andiolava, Soatambary ary Ambatolahy. Nilaza izy ireo fa lovan’ny ray aman-dreniny ny tany izay novolena aman-taonany araka ny fomba fanao any an-toerana. Tsy misy "titres" na vita "bornes" fa fananam-pianakaviana ara-pomba malagasy efa aman-taonany maro. Ny tany dia mifono ny fiainana sy ny tantaran’ireo razany. Raha alain’ny fanjakana an-keriny ny tany dia ho very izahay, hoy izy ireo. Ho fongotra toy ny manjo ny omby ny taranaka fara mandimbiny satria koa ny tany no misy ny vilona. Ho very ny vola fivelomana azo avy amin’ny fiompiana ny omby. Io fivelomana amin’ny alàlan’ny omby io mantsy no ahafahany mandefa ny zanany any am-pianarana. Misy tany fambolena tsy azo ampiasaina intsony ary nohon’ny asan’ny trakitera dia misy faritra tsy azon’ny omby handalovana intsony. Ny savoa dia tsy fihinan’ny omby sy ny olombelona, na ny lehibe na ny zaza madinika, hoy izy ireo. Mangataka ny fanjakana izany izy ireo hiantra ka hiaro azy.
Nisy mponina nanaiky ny tolotr’ity orinasa ity, hoy izy ireo, ary ireo izay tsy manaiky dia nampitahorina. Nampanantenaina fanomezana maro samy hafa hoy izy, izay tsy hita poapoaka. Samy milaza avokoa izy ireo fa tena ilaina maika tokoa ny fiarovana ny Zony, ny fiarovana ny tany sy ny fananan-tany, izay andrin’ny fivelomany sy ny tena maha-Izy-azy.
Ny tena tra-boina dia ny mpiompy omby amin’ny faritra misy ny vilona
Ny ankamaroan’ny mponina ao amin’ny faritr’Ihorombe dia ny Bara izay mpiompy omby. Ireo tany midadasika tazana any izay heverin’ireo mipetraka an-tanan-dehibe fa tany maina tsy misy olona dia tany misy ny vilona hohanin’ireo omby. Misy firenena mahavita mitantana am-panajàna ireny tanim-bilona ireny amin’ny alàlan’ny sata na fehezan-dalàna mifehy ny tontolo ambanivohitra fa ny mpitondra malagasy teo aloha sy ankehitriny dia tsy niraika tamin’izany. Mety tsy mahagaga raha tsy miraharaha ny fomba malagasy sy izay fomban’ny mponina ny orinasa Tozzi Green sy ireo mpitantana ny orinasa, fa dia manaitra kosa ny tsy fiarovana izany avy amin’ny fanjakana malagasy sy ny tompon’andraikitra any an-toerana. Indrindra moa fa nanao sonia ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ireo zo ara-ekonomika sy sosialy ary ara-kolotsaina (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ) (2) ny fitondrana malagasy.
Amin’izao fotoana izao dia 8 000 ha no efa nahazoan’ny orinasa alalana, 2 000 ha no efa voavoly, « ity soritr’asa ity dia ahitàna mpiasa matihanina (permanents) mi-isa 170 ary eo amin’ny 2.000 no isan’ny mpiasa saraka antsaha (saisonniers). 50% no avy ao amin’ny faritr’Ihorombe » hoy ny gazety(3) taorian’ny dokam-barotra nataon’ny orinasa Tozzi Green. Kely arak’izany ny asa azon’ny mponina raha ampitahaina amin’ny loza mitatao eo amin’ny lafiny kolo-tsaina sy ara-toe-karena ary ara-sosialy.
Maro ireo fanontaniana mipetraka mikasika ny votoatin’ny fifanarahana sy ny tombotsoa ary ny adidin’ny orinasa nandrasana
Araka ny fantatra dia toa manofa amin’olon-tsotra ny tany amboleny ny zana-tsavoa ny orinasa Tozzi Green ary nahazo bail emphytéotique tamin’ny fanjakana malagasy. Tsy mazava anefa ny halavan’ny bail satria miova arakaraka’ny lahatsoratra mivoaka amin’ny gazety, indraindray 25 taona, indraindray 35 taona. Ilaina ary angatahana izany ny ahitàn’ny be sy ny maro ny tena marina momba io bail io. Firy hekitara no haben’ny tany voasoratra ao anaty contrat amin’izao fotoana izao ? Inona marina ny adidy sy fepetra nomena io orinasa io ahafahana manitatra tsikelikely ny tany omena azy ? Inona no singa sy zotra tokony arahin’ny Comité de Pilotage (4) handanjalanjany arakin’ny tokony ho izy ny tena zava-bitan’io orinasa io ka hanomezany alàlana ho fanitarana indray ny tany ? Inona no tena ao ambadik’io fomba filaza mahagaga hoe roa arivo hekitara mbola fanandramana io (« 2 000 ha toujours en phase d’essai ») ? (5) Ilaina hazavaina tsara sy amin’ny antsimpiriany amin’ny olom-pirenena Malagasy ny votoatin’ireo contrats rehetra : iza amin’ireo manam-pahefana no nanao sonia, inona no tombotsoa handrasan’ny Malagasy amin’izany ? Inona no neritreretina hatao momba ireo olona mipetraka arakin’ny fomba sy zon-drazana amin’ireo tany azon’ny orinasa ? ..…
Kasaina omena tanteraka ny orinasa Tozzi Green ve ny faritr’Ihorombe iray manontolo izay mivelatra eo amin’ny 2 000 000 hekitara ? Sa hifampizarany amin’ny orinasa goavana hafa? Mba hisy velaran-tany heverina hatokana ho an’ireo fianankaviana mpamokatra sy ny fara sy dimbiny izay mivelona amin’ny fambolena sy ny fiompiana amin’ny tany midadasika "élevage extensif" ve ? Raha mitsinjo ny fandrosoana maharitra sy ara-drariny ho an’ny daholobe isika Malagasy, raha mitsinjo ny fanatsaràna ny fari-piainan’ny ankamaroan’ny Malagasy fa tsy ny an’ny olom-bitsy ihany, dia ataonay fa ilaina tokoa ny mampahafantatra ny zava-misy sy ny fikasàna rehetra amin’ny mponina voakasika mivantana. Ilaina ihany koa ny fanomezan-danja ny fomba amam-panaony sy ny heviny ary ny tombotsoany mba hifanaraka amin’izany ny asa fampandrosoana, izay tokony ho an’ny olon-drehetra ny vokany.
Ny valin’ireo fanontaniana ireo dia zava-dehibe antenain’ny olom-pirenena rehetra eran’ny Nosy sy eran-tany, fa tsy raharaha mahakasika ireo tompon’andraikitra isan’ambaratonga na ny Ray aman-dreny amin’ny tanàna tratran’ny voina ateraky ny fangalàna tany tsy ara-drariny ihany. Ny zava-miseho ao Ihorombe dia mampanontanitena sy mahaliana ny Malagasy rehetra. Ao anatin’ny fanjakan’ny tsy fisian’ny mangarahara momba ny fifampiraharahana mikasika ny tany amin’izao fotoana izao mantsy dia ao no misy ny velarantany midadasika indrindra fantatra fa misy fakàna tany tsy ara-drariny. Ka zava-dehibe ny faharaha-maso akaiky ny zava-misy ao sy ny tsy fanekena aingana izay hita fa tsy mety miseho ao mba tsy hisian’ny fomba lasa fanao ka hihatra any amin’ny toerana hafa ao Madagasikara. Manan-danja lehibe rahateo koa ny fiarahana miaro ny zo sy ny fomba ary ny kolontsain’ny mponina ao amin’io faritra io. Mitaky fiambenana manokana amin’ny olom-pirenena rehetra koa ny harena an-kibon’ny tany izay tsy toko tsy forohina ihany koa amin’io faritra io.
Ireto fivondronan’ny mpiompy sy tantsaha dia mangataka am-panajana ny Fitondram-panjakana mba hijery manokana ny voina mahazo azy. Tamin’ny volana octobre 2012 taorian’ny diany tany Eoropa dia nisy tompon’andraikitra ambony ao amin’ny fitondrana miandraikitra ny fananan-tany nandalo tao Ihorombe nandray tamin’ny fomba ofisialy ny fiara tsy mataho-dalana (tout-terrain) sy ny solo-saina (ordinateurs) ho an’ny sampandraharan’ny fananan-tany sy ny fandrefesan-tany (services des Domaines sy Topographie) « vokatry ny fiaraha-miasa amin’i Tozzi Green » hono (6). Izany fandalovan’ny tompon’andraikitra ambony tao Ihorombe izany ve nifanandrify tamin’ny fanomezana alalana ny orinasa Tozzi Green hanitatra ny velaran-tany hiasàny ? ka nampitombo ny fatahoran’ny mponina ho very tany ?
Ny sampandraharaha misahana ny serasera ao amin’ny Tozzi Green izay matanjaka tokoa dia nilaza fa ity orinasa ity dia hametraka ao Satrokala ny BIF (Birao Ifoton’ny Fananan-tany), guichet foncier - izay hitantana ny fanomezana kara-tany (certificats fonciers) eo amin’ny velarantany tsy manana "titres" (4) – Mampitraotra sy tokony hampisaitsaina lalina ireo tranga ireo fa toa mitady hifangaro izany ny mpaka tany sy ny mpanome alàlana amin’ny fahazoana tany amin’iny faritra iny.
Miantso antsika hanotrona ny mponina izay miaro ny fananany !
Tsy ekena ny fampitahorana ny Malagasy ao Ihorombe izay sahy mijoro mangataka ny ijanonan’ny fanitaran-tany ho an’ny orinasa Tozzi Green !
Mbola mamerina sy manindry ny fangatahana mba haseho amin’ny fomba mangarahara amin’ny daholobe ny ao anatin’ny contrats rehetra nosoniavin’ny Fitondrana satria ny hoavin’ny firenena sy ny fara aman-dimby Malagasy no voafatotr’izany !
Tokony ajanona manomboka izao ny fandrobàna sy fanaovana ampihimamba ny tany ao Madagasikara !
Paris, 27 novembre 2012
patrimoinemalgache@gmail.com www.terresmalgaches.info http://www.facebook.com/TANYterresmalgaches
(1) Dikanteny malalaky ny lahatsoratra ‘Ihorombe - Fasana sy trano maro noravan’ny Tozzi Green’ nivoaka tao amin’ny Inona ny Vaovao laharana 1031.